Isandla esipholisayo somculo | Scrolla Izindaba
Isandla esipholisayo somculo
Ukwelashwa ngomculo kweziguli ezigula ngengqondo sekuyinto enkulu emhlabeni wonke.
UBola Otegbayo, ongusosayensi, ulethe le ndlela yokwelapha ophikweni lwabagula ngengqondo e-University College hospital e-Ibadan, e-Nigeria.
UOtegbayo ubuye futhi aziwe njenge-musicologist – uchwepheshe wokwelapha iziguli ngomculo.
Kanye noma kabili ngenyanga, uletha iqembu labahlabeleli nabaculi kwabagulayo.
UOtegbayo, osesithombeni ngenhla, utshele i-The Guardian izindaba zakhe zempumelelo:
● Isiguli ebesingakwazi kwenza lutho siqale ngokushaya izinzwane kusigqi, sasesiyagxuma sadansa
● Abesifazane ababili banyakaza ndawonye enguqulweni kaMichael Bolton ethi-Lean on Me.
UOtegbayo, oneziqu ze-physics nakwezomculo, uthi “Akuyona [into] noma yimuphi umculi angayenza. Awenzi nje bese uyahamba. Kumele ubabheke futhi.”
Umculo nawo ungadala ukungacindezeleki, uyachaza, ngakho-ke kufanele ubuke ngokucophelela, ngemuva kokuqeqeshwa ngokomsebenzi.
Yize kungaziwa kangako e-Nigeria, ukwelashwa ngomculo manje sekufundiswa eNingizimu Afrika, e-Canada, e-New Zealand naseMelika.